i . Download si toos ah ay u iPhone
Marka aad ka gobolka tiro-u dhiibay unwrap telefoonka gacanta, waxaad ogaatay in waxa wax eegayey oo xiiso leh waxa ay ahaan laheyd haddii ohyahay in ciyaaraa ku yaal waa ringtone jecel. Qofka ayaa ringtone ayaa bayaan ay muujinaysaa waxa isagu ama iyadu soo jiitay. Tani waxay keeni kartaa in safar shakhsi ah si ay u bilaabaan raadinaya song in nadiifsan in smooths qalbigaaga.
Baahida loo qabo in download ringtone ugu fiican ee aannu telefoonka uu noqday xoog, taasi waa sababta oo ah ringtones nagu aqoonsado inaannu fasalka iyo sidoo kale, ay ogaadaan qofka ku soo wacayo (kiis halkaas oo aad leedahay ringtones kala duwan). Merchant si firfircoon sii kordhaysa maalin kasta, iyaga oo baaris waa in ay hubiyaan in ay ka qaadanayaan in dollar oo dheeraad ah ee idinkaa iska leh, oo kaliya in ay soo bixi ringtones ka goobood oo ay. Tani ayaa ku hayaan dhib in ringtone caashaqi jiray kuwaas oo doonaya in ay garoonka kaamil ah in ay mid ka mid ah in la garaaco iyo rock taleefannadooda gacanta, maxaa yeelay, goobahan aad qaali u yihiin marka ay bixiyaan adeegyada ay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira goobo oo qof oo dunida ku soo bixi kartaa ringtone in ay jecel galay taleefannadooda gacanta oo lacag la'aan ah oo dhan. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah goobaha bixiya adeeggan lacag la'aan ah.
Zedge waa mid ka mid ah goobaha ringtone ugu caansan ka mid ringtone jecel iyo sidoo kale kuwa jeclaan qatarsanaa raadinaya waraaqaha derbiga ku shubtaan taleefanadooda iyagoo. Waxa ay ku bilaabatay hawlaheeda ku saabsan 10 sano ka hor iyo tan iyo markaasna waxa ay ku riyaaqay wax badan oo guulo ka suuqa hadafkaagu ay, inta badan user ee ay sheegayaan in ay aad u hesho ku qanacsan tahay wadarta ka adeegyada la siiyo.
Mobile9 waa website leh xamuulka ah Gurtida bixi karo oo lacag la'aan ah oo qof kasta oo loo ogolaan karaa. Si kastaba ha ahaatee, ka duwan Zedge ee this site waxay u baahan tahay in aad sameysato akoon lacag la'aan ah iyaga la si aad noqon kartaa awoodaan inay ku raaxaystaan ​​adeegyadooda. Waxay dadka u soo bixi kala duwan oo ah ringtones mp3 iyo codsiyada soo bixi lacag la'aan ah iyo wax kharash ah ku maqan.
Tani waa websites kale firfircoon ayaa heshay dib u eegista wayn wanaagsan ka user ee ay. Waxa uu heystaa rikoor ah oo ka badan shan milyan oo ringtones bixi karo oo lacag la'aan ah; Si kastaba ha ahaatee, sababta ugu sareysa sababta loo jeclaa oo ag badan yahay, maxaa yeelay, aad si fudud u samayn kartaa ringtone gaar ka ah ururinta iyaga ka mid ah. Taas waxaa la samayn karaa iyadoo kaliya seddex talaabooyin fudud oo laga heli karaa goobta.
Waxaa la mid ah mobile9 sida ay sidoo kale u baahan tahay dadka si ay u abuuraan xisaab ah si ay u bilaabaan riyaaqayaa adeegyada firfircoon halkaas ku bixiyeen. Waxay waxaa loo arkaa faa'iidada in xad ah ee ringtones in jilcin wadnaha ama sida dhalinyarada u wac, ringtone la swag. Si aad u soo bixi ringtone ka this site aad leedahay si aad dhirtuba la soo aruuriyay badan, ka dibna u dhagaystaan ​​mid ka mid ah oo aad soo bandhigay iyo download it haddii ay aad u dhadhan.
Waxaa la og yahay, waayo, tayada adeegyada u bixinayo, tani waa sababta ugu badan ee dib u eegista la siiyay taas positivity goobta show. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala si ay u noqon in ay soo bixi ringtones ka ururinta badan oo iyaga ka mid ah ay awoodaan. Users ay awoodaan in ay caleenta iyada oo qaybo ka mid ah ku sifayn natiijada fudud ee nooca midab ay doonayaan inay la soo bandhigay taleefannadooda.
Tani waa website kale oo aad leedahay ogolaataa dadka inay saxiixdo lacag la'aan ah oo iyaga raac; Si kastaba ha ahaatee, waxaad weli noqon kartaa awoodaan inay ku raaxaystaan ​​adeegyada iyaga oo aan la abuuro xisaab. Ugu feature ayaa nadiifsan hortooda ah oo aan aad u ma aha oo kaliya kala soo bixi kartaa ringtone ah, laakiin waxaad gali kartaa sidoo kale ku saabsan. Goobta bixisaa tallaabo ay tacliin tallaabo ku saabsan sida loo soo bixi ringtones u xoogsashada kuwaas oo aan la soconnay oo habraaca.
Boggan ma aha oo kaliya shaqo ku leh ee ringtones ugu fiican in industry ringtone ah, laakiin sidoo kale la waraaqaha lagu naalloon karo derbiga, mawduucyada iyo ciyaaraha ugu fiican iyo barnaamijyadooda laga helo suuqa. Waxaas oo dhan waxaa soo bilaash ah oo kaliya download click ah waxaa looga baahan yahay macmiilka ku raaxaysan adeegyada haybad ku bixiyeen. Goobta waxay u baahan tahay in aad ka akhriyi ay shuruudaha iyo xaaladaha ka hor inta abuurista xisaab iyaga la.
Cellmind waa website u gaar ah oo la hir qaybiyay iyo mid si fudud u dhex mushaaxaan karaa inuu iska baro la. Waxa aan kaliya ayaa bixiya downloads lacag la'aan ah, laakiin sidoo kale siinayaa fursad ay iyaga u jecel downloads free waraaqaha derbiga iyo Apps. Goobta uu ka qiimo wayn oo ah ammaan iyo loo arko website a ringtone hore sii kordhaya. Iyadoo ay taasi jirto, haddana ma laha kala duwan oo siyaado ah oo ringtones uu ka soo xusho.
Tan waa bog in inta badan ka hadlaya ringtones Mp3 Indian. Waxay kala duwan oo ka mid ah heesaha sida iyo aad u heli kartid iyaga baadhi aad song jecel; Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira fursado kale oo ku soo kacay tallaabadaas ku sifayn aad dooratay doonaa. Goobta marka laga reebo bixiya ringtones free sidoo kale bixisaa waraaqo derbiga Bollywood, mawduucyada iyo videos.
Unlocker waxay leedahay noocyo kala duwan oo ringtones laga heli karaa goobta kuwaas oo lacag la'aan ah. In kasta oo aad weli u soo bixi kartaa ringtone goobta aan abuuro xisaab, wax badan oo kala duwan oo firfircoon ayaa la heli karaa haddii xisaab loo abuuray. Goobta laftiisa wuxuu ka kooban yahay muuqaalada u qurux badan, si loo waafajiyo user.
Tani waa website adag in uu leeyahay bixisaa noocyo ka mid ah ringtones mp3 ka oldies oo dahab wanaagsan ee Louis Armstrong si qalad dhexe ee Diana Ross oo xaq u galay goob joog u ahaa caanka ah ringtone caanka ah ee maanta. Goobta waxa lagu yaqaan in ay qaadaan muda ah content ringtone xitaa laga yaabaa in ka badan ringtones Mad, si kastaba ha ahaatee waxa la arkaa in ay haqab sida badan oo fayrus waxa lagala soo bixi la content ringtone ah, laakiin hubi in ku filan ma seegi kartid ringtone kasta oo halkan.
Tani waa u fududahay ah inaad kala soo baxdo website sida oo dhan ringtones ah waxaa loo kala saaraa sida ay ku sifayn, waxa kale oo aad ka raadin kartaa ringtone in uu jecel yahay oo aad u gilgishay baxay. Tani waa sababta oo ah goobta loo yaqaan in ay ugu rarataan culaysyo ee ringtones aad bandhigay, si kastaba ha ahaatee ka duwan Dilandau inta badan ay ringtone waa ka 90 ee maanta.
Tani waa websites ringtone lacag la'aan ah in inta badan ku siiya adeegyada ay yihiin dadka ku isticmaala mobiilka Ericsson Sony. Taas waxa loo sameeyaa si loo hubiyo in ay si fudud u heli karo in ringtone soo jiidasho leh oo ay jecel yahay si ka badan. Bogga internetka ee ma aha oo kaliya awood u isticmaala Sony Ericsson soo bixi ringtones, laakiin sidoo kale gidaarka waraaqaha iyo mawduucyada iyo sidoo.
Tani waa website lacag la'aan ah ringtone ayaa hawlgal muddo ka badan toban sano. Goobta ayaa casriyaynta waaweyn ee waayadan dambe oo waxa ay u muuqataa si xarrago leh iyo ilaa heerka badan ka hor. Habkani wuxu qoondeeyaa ringtones lacag la'aan ah sida ay gobolka iyo dalka oo ah halka ay goobta la arki ka iyo dhaqaaqa fudud loo sameeyaa gudahood goobta.
Phone My u yar.
Website-kani u ogolaan ringtone caashaqi jiray si ay u awoodaan si ay u abuuraan ringtones lacag la'aan ah oo iyaga ku haboon noocyo kala duwan oo Mp3 ringtone iyo videos tube aad. Waxa kale oo uu heysto dooq kale ee lagu badbaadinayo oo dhan ringtone in aad rabto in aad hal gal ka hor lagala. Arrinta keliya ee looga xumaado ku saabsan website-kan waa ogaysiiska ku darayaa in sii dhisayaa.
Jelly cell waa goob kaasi oo aan lahayn kulan balaaran oo ka mid ah ringtones weli ringtones waxaa sida caadiga ah la casriyeeyay oo aad kala soo bixi kartaa ringtones oo ka mid ah Gurtida ugu dambeeyey. Goobta xitaa u fasaxaya macaamiisha si ay u sameeyaan ringtones Mp3 ay ka files mobile iyo tan iyo muuqaalada YouTube. Waxaa la soo jeediyay in ay leedahay wax badan oo caan inkastoo dhan ceebaha ay.
Inkastoo this site yahay ma laha ka sameysato akoon ama gasho doorasho, waa sidaas la mid ah Dilandau sida ay sidoo kale bixisaa ah oldies oo dahab ah, heeso da'da dhexe iyo kuwa la joogo. Si kastaba ha ahaatee, goobta uusan haysan ururinta weyn ee heesaha ee nooc oo kala duwan; tani waa sababtoo ah waa goob cusub oo uu leeyahay dhibaatooyin adag lagu casriyeeyo ay database.
Ringtones Free 4 All.
Tani waa website in inta badan ka hadlaya ringtone mobile ah ee jiilka hadda. Waxaa goobta fudud, laakiin bandhigay nidaamsan oo howlgal ay fududahay in la caawiyo user si ay u awoodaan in ay wadaan hareeraha fudayd. All ay ringtone waa lacag la'aan iyo ururinta badan oo ah jiilka ringtone hadda waxaa laga helay this site. Waxa kale oo jira ikhtiyaarka ah oo ay awoodaan in ay la xiriiraan daryeelka macaamiisha ay dhacdo dhibaato ku saabsan goobta soo baxdo.
Dhig Own Ringtone.
Tani waa goobta a free ringtone la lagma buuxda awood badan ahaanshaha si loogu badalo files ringtone aad galay codadka fiican Suite telefoonka ringtone awoodaan. Waxaa jira saddex hababka in awood kartaa inaad gaarto taas oo kala ah, u hababka fudud, Advanced iyo Expert. Hababka ayaa sidoo kale fursado dheeraad ah in dadka isticmaala astaysto ka hor soo degsado ringtone in iyaga soo bandhigay.
Tani waa website u baahan in dadka doonaya inay isticmaalaan adeegyada ay u aan marka hore gasho ay goobta. Updates joogto ah ayaa waxaa inta badan ka dhigtay si ay u qaadi kartaa noocyo cusub oo ah gabayo suuqa. Downloads ee ringtones, kuwaas oo si fudud iyo tilmaamaha ku haboon waxaa lagu soo bandhigaa si ay kuugu hagaan ku saabsan sida loo heli midab la doonayo.
Tani waa website la muuqaalada fudud, ay fududahay in la falgali oo ay isticmaalaan. Waxa aanu lahayn ururinta balaadhan oo ah ringtones Mp3; Si kastaba ha ahaatee codadka halkaas waxaa loo arkaa ilaa heerka tayada iyo qayb ka mid ah ugu wanaagsan isagoo sheegay in ay yihiin lacag la'aan ah. Cell 11 dhawaan ayaa laga badiyay warkiisiina ay sabab u tahay kor u pop dhibsado ku darayaa in si joogta ah ka muuqan goobta.
Tani waa goob inta badan u sameeyey iPhone isticmaala qaar ka mid ah kuwaas oo u baahan taabtana ringtone oo tayo leh oo ku saabsan iPhone ay. Bogga internetka sida goobaha ringtone kale oo badan oo bilaash ah ayaa sidoo kale u baahan tahay dadka si ay u abuuraan xisaab si aad ku raaxaysan karaan adeegyadooda. IRinger wuxuu leeyahay feature gaar ah halkaas oo dadka isticmaala noqon kartaa awoodaan in ay faallo ka ringtone gaar ah iyo xitaa waxaa qiimeyn.
Boggan waxaa pimped in Suite wakiil ah horyalka Talyaaniga, iyadoo design ah xarrago leh iyo nadiifsan. Waxay bixisaa tiro balaadhan oo ah ringtones Mp3 kuwaas oo si fudud loo heli karo in dadka isticmaala ay. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta duuban waxaa la samayn karaa ay tahay in aad sameysato akoon lacag la'aan ah goobta; Tani waxay sidoo kale ka dhigi doonaa in aad loo dhan yahay si kala duwan balaadhan oo ah ringtone ay bixiyaan. Bogga waxaa kaloo ku ogolaataa dadka inay kala soo bixi kulan oo lacag la'aan ah, barnaamijyadooda iyo waraaqaha derbiga.
Tani waa goob caan ku ah inuu xisaab qaato, la inuu xisaab qaato, gaar ahaan goobta hore ee quruxdiisa xarrago leh soo bandhigay by goobta laftiisa. Lagu yaqaan profile sare waraaqaha derbigeedii oo tiro badan oo ringtones Mp3, this site waxa ay awood u hayn ay ammaan iyo xaq ugu faanayay u mararka qaar. Maanta, waxaa jira muujinta a cusub oo u saamaxaya in ay marka hore soo gasho si ay u bilaabaan riyaaqayaa adeegyadooda.
Tani waa goob yar oo uu hayo muuqaalada kuwa is-hoosaysiiya ay sanad hadda; Si kastaba ha ahaatee waxa uu haystaa kala duwan oo ringtones kuwaas oo madadaalo iyo adag tahay inay helaan in websites kale. Khaladkaasi ay tahay goobta waa inay eegtaa waxay u miskiinsanaa oo ay bandhigay oo keliya.
Tani waa website in uu ahaa howlgal muddo sanado ah qaar ka mid ah hadda; waxa uu ku guulaysteen, inay ay halleeyo lillaahinimada iyo profile sare u tiro badan oo markii ay ka soo wareegtay in ganacsiga. Waxay bixiyaan ringtone ugu dambeeyay ee dalal kala duwan oo ku sifayn oo dhan lacag la'aan ah iyada oo aan la xadhig ku rakiban yihiin. Waxay sidoo kale meel waraaqaha derbiga lacag la'aan ah dadka caanka ah loo jecel yahay oo ay diyaar u yihiin download oo dhan lacag la'aan ah.
Tani waa website in sidoo kale dib u isticmaala faraya in ay tahay in la abuuro website oo lacag la'aan ah si ay u bilaabaan riyaaqayaa adeegyada qabow halkaas ku bixiyeen. Waxaa jira mugga weyn oo ringtones ka database PhoneZoo ah, inta badan heesaha Mp3 ah waxaa inta badan waxa ay ka yimaadeen dadka iyaga uploaded ka faylasha ay. In this site jiro feature la yaab ku dheehan yahay loo ogol yahay inay ka bedel ringtone ah.
Inkastoo this site la og yahay in ay ka qaadaan dadka isticmaala ay qaar ka mid ah ringtones bixisay, clips ka mid ah ringtone dhabta ah iyo arbushin ilaa darayaa, waxa ay leedahay ururinta badan oo qaar ka mid ah MP3 ringtones classical kaheli lacag la'aan ah. Boggan ayaa og sida mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan si ay u soo bixi sida inta badan waxa ay bixiyaan waa virus oo lacag la'aan ah, si kastaba ha ahaatee ay goobta aan la arki karo in qaybo ka mid ah adduunka.
Sida magacaba ka muuqata halkan Gurtida way adag yihiin si ay u helaan, tan iyo markii goobta soo saarta Gurtida kaliya oo dabiici ah dhawaaqyada nibiriga sida iyo ringtones kale xoolaha. Goobta, si kastaba ha ahaatee waxay u ogolaaneysaa forum ah oo ay dadku kala hadli kartaa dhawaaqyada kala duwan ee madadaalo iyo ujeeddooyin waxbarasho.
Tani waa website ka taageera dhammaan noocyada kala duwan ee telefoonada iyo si toos ah u dirayaa ringtones iyaga mar soo bixi. Si aad u soo bixi ringtones ka this site waa u fududahay, tan iyo markii ay jiraan guideless cad oo ku tusi sida aad u samayn karaa.
> Resource > Free > Top 30 Shabakadaha in Download Free Ringtones